Warshad - Wikipedia
Warshad weyn oo saarta alaabta.
Warshad (Af-Ingiriis: Industry) waa waa dhismo wayn oo qalab wax lagu sameeyo iyo dad aqoon u leh ka shaqeeyaan, taas oo soo saarta alaab badan. Warshaduhu waa furaha koboca dhaqaalaha wadan ama qaarad.
Noocyada warshaduhu way kala duwan yihiin, kala wayn yihiin, kala shaqaale badan yihiin, oo waxsoosaar kala badan yihiin. Warshadihii ugu horeeyay dunida waxay ahaayeen warshadaha dhuxul dhagaxa iyo warshadaha birta, laakiin mudo ka dib, teknoolojiyada oo horumartey darteed waxaa samaysmay warshado badan, sida warshadaha gaadiidka, kuwa maacuunta, kuwa alaabaha elektarooniga iwm.
Ayadoo la tixraacayo alaabta eeys soo saarto ayaa warshadaha loo kala saari karaa noocyo badan, tusaale ahaan warshadaha dharka, warshadaha shidaalka, warshadaha kaluunka & kheyraadka biyaha, warshadaha elektarooniga, warshadaha softwarka, warshadaha cuntada, warshadaha waraaqaha, warshadaha madadaalada]] iwm.
Warshadaha iyo Dhaqaalaha
Warshaduhu waa illo dhaqaale oo muhiim ah. Wadanka warshado badan leh dhaqaalihiisu wuu sareeysaa, sababtoo ah dadkiisa inta u badan weey shaqeeyaan dhaqaale fiicana helaan. Taasi waxay keentaa in Dawladda wadanku hesho canshuur badan oo dhaqaaleheeda aad u dhista.
Wadanada reer galbeedku waxay leeyihiin warshadaha ugu badan dunida, taasi ayaa keentay ineey hogaan u noqdaan dhaqaalaha iyo Siyaasadda dunida.
Wadanka Soomaaliya inkastuu ka mid yahay dalalka dunida 3aad ee soo koraya, ka hor burburkii dowladii hore ee Siyaad Barre wadanku wuxuu lahaa warshado badan oo waxsoosaara laakiin la bililiqeeystay ama burburey wakhtigii dagaalada.
Sidaas ay tahay maanta majiraan wax warshado ah oo dalka gudihiisa kashaqeeya laakiin kuwii hore waxaa kamid ah
Warshada kaluunka ee Laasqoray oo aan hadda shaqeynin
Warshada Hilibka ee Kismaayo oo aan hadda shaqeynin
Warshada Dharka ee Balcad oo aan hada shaqanin.
Warshada Caanaha ee Xamar oo aan hadda shaqeynin
Warshada Sonkorta ee Jowhar oo aan hada shaqaynin.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Warshad&oldid=161761"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Oktoobar 2016, marka ee eheed 01:51.